मेलम्चीका चिनिया ठेकेदार भन्छन् : राष्ट्रपति सीको आदेश छ ! – Agrimpost
मुख्य पृष्ठसमाचारमेलम्चीका चिनिया ठेकेदार भन्छन् : राष्ट्रपति सीको आदेश छ !
काठमाडौं दुई दशकअघि नै सुरु भएको मेलम्ची परियोजनाले काठमाडौंमा पानी खसाउने मिति धेरै पटक तोकिए पनि काम अझै सकिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो वर्ष आगामी वैशाखमै मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौंमा आइपुग्ने घोषणा गरेका थिए । त्योभन्दा पछि खानेपानी मन्त्री बीना मगरले दशैंमा काठमाडौंवासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउने दाबी गरिन् । यसभन्दा पहिले पनि विभिन्न सरकारका पालामा काठमाडौंमा मेलम्ची आउने मिति तोकिएकै हुन् ।